Maamuuskii Uhuru Kenyatta U Sameeyey WABAR CABDILLE, Safarkiisa Kenya Iyo LIX Arrimood Oo Saldanadda DAGOODIYE Hormood Ugu Tahay Soomaalida - Jigjiga Online
HomeSomalidaMaamuuskii Uhuru Kenyatta U Sameeyey WABAR CABDILLE, Safarkiisa Kenya Iyo LIX Arrimood Oo Saldanadda DAGOODIYE Hormood Ugu Tahay Soomaalida
Wabarka beesha Dagoodiye wuxuu la kulmay madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta oo sheegay: “Waxaan u baahan nahay in aan wada noolaano inagoo walaalo ah oo xushmeyneyno dhammaan bulshooyiinka gobolka.”
Wabar Cabdile wuxuu hoggaamiye dhaqameed u yahay dhamaan beesha uu ka dhashay ee ku kala nool bariga Afrika iyo kuwa ku nool qeybaha kale ee dunida, Wuxuuna mas’uul ka yahay hawlaha beesha.
“Wuxuu mideeyaa dhammaan reerkaas meel walba oo ay dunida ka joogaan, wuxuu leeyahay wakiilo isaga uu u wakiisho xalinta dhibaatooyinka ka taagan deegaanada reerka uu dego, kuwaas oo u fariista garta deegannaada fogfog ee uusan gaari karin wabarka”, ayuu yiri afhayeenka Wabarka, Macallin Cumar Macallin Bisin.
2. Go’aan gaarista ugu dambeysa
Afhayeenkiisa ayaa sidoo kale BBC-da u sheegay in Wabarka uu leeyahay gole guurti oo la shaqeeya, kuwaas oo u soo gudbiya waxyaabaha ay tahay in uu go’aan ka gaaro.
Marka ay timaado go’aan gaarista arrimaha beeshiisa, wuxuu sheegay in Wabar Cabdile uu yahay qofka ugu dambeeya ee go’aankaas gaari kara.
Wuxu intaa ku daray in inkastoo odayaasha dhaqanka marka hore loo gudbiyo arrintan oo ay soo jeediyaan talada ay u arkaan in ay tahay macquul, haddana wixii uu Wabarka ku qanci waaya, wuxuu xaq u leeyahay in uu gaaro go’aan aanan laga daba hadli karin, wax racfaan ahna aanan laga qaadan karin.
Waa naadir in qaar ka mid ah beelaha Soomaalida lagu arko oday dhaqameed beeshiisa u gaara go’aanka kama dambeysta, oo waxaa inta badan la arkaa in odayaasha ay ku dhaqaqaan tala loo dhan yahay.
Inkastoo sida afhayeenka Wabarka uu sheegay uu leeyahay xoolo nool, oo uu xoolihiisa raacdo, haddana beeshiisa ayaa marwalba la garab taagan xoolo joogta ah, hanti ahaanna uu u leeyahay guri, babuur, lix boqol oo neef oo geel ah, ari gaaray kun neef iyo saddex boqol oo neef oo lo’ ah, sida uu sheegay afhayeenka.
“Wabarka siyaasad wax shaqo kuma lahan, sababtoo ah siyaasadda way iska caddahay oo hal dhinac ayaad la safaneysaa, isaguna ma doonayo in xurmada, karaamada iyo wanaagga ay ummadda u hayaan uu lumiyo, wana taas sababta uusan usoo faragashanin arrimaha siyaasadda”. Sidaas waxaa BBC-da u sheegay Afhayeenka Wabarka